Ukwenza Ityala lokuThengisa ngeenkonzo zokuThengisa nge-imeyile
NgoLwesine, Meyi 27, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 UScott Hardigree
Kubathengisi abafuna ukumba umgodi wegolide ngakumbi kwiinkqubo zabo ze-imeyile; Intengiso ye-imeyile yangaphandle ifumana ukuthandwa ngokukhawuleza.
Ukuthengiswa kwe-imeyile okulawulwayo kunokuthatha iindlela ezininzi, ezinje ngobuchule kunye nolawulo lonxibelelwano lwe-imeyile oluqhubekayo.
Inokubandakanya ukuphuculwa komxholo, ukuhanjiswa kwemijelo enqamlezileyo, ukukhula koluhlu, kunye nokudityaniswa kobuchwephesha okungachazwanga kunye neendlela zokunika ingxelo. Uluhlu lude.
Kwimeko nayiphi na into, xa abathengi bethu beza kuthi becela iinkonzo ze-imeyile ezilawulwayo ubukhulu becala kungenxa yokuba catshukiswa kwaye ziqhamo.
Batyisiwe. Abanakufumana italente yangaphakathi endlwini okanye isiphon imveliso eyongezelelweyo (okanye amandla) kubasebenzi abakhoyo, kodwa bayazi ukuba banako kwaye kufanele ukuba benza okungakumbi.
Yinto eqhelekileyo leyo. Ngeendlela ezininzi ukuthengisa nge-imeyile kuluqeqesho olwahlukileyo. I-imeyile inzima. Kodwa ngezinye iindlela ifuna italente kunye nokuzimisela. Kunzima ukufumana zombini ezi mfuno kwindawo enye okanye iqela elisebenza kakhulu nelingaqeqeshelwanga kakhulu.
Ukukhutshelwa ngaphandle kuyasebenza kuba kuvumela abathengisi ukuba bacofe izakhono ezahlukeneyo zamaqabane abo… nokuba yiarhente yentengiso ye-imeyile okanye i-ESP.
Ngaphandle kokuyila, izakhono zobuchwephesha, kunye namandla okweyisela (konke oku kuyimfuneko ukuba uza kuphumelela umdlalo we-imeyile), iqabane lokuthengisa nge-imeyile lizisa namava okusebenza kunye nesiseko sabathengi abahlukeneyo. Lo ngumthombo ongenamda weembono ezintsha eziqinisekisa ukuba iinzame azibi lixhoba "lokucinga kweqela" kwaye idola nganye echithwe yandiswa.
Xa uthatha isigqibo sokukhupha ukuthengisa nge-imeyile okanye ukuyigcina isendlwini, uninzi lwabathengi bethu luqale lajonga iidola ukubona ukuba iyavakala na. Bazizityebi kwaye abazobudenge.
Masijongane nayo, iinkonzo zokuthengisa nge-imeyile zithatha ixesha. Ke, ngohlobo oluthile okanye olunye, ixesha ngumthombo weendleko zomthengisi.
Eso sesinye sezizathu zokuba ukukhutshwa kwabasebenzi kunengqiqo; kuthatha ixesha elincinci.
Ngenxa yamava eziswa liqabane lakho le-imeyile etafileni, akukho nto ingako ekufundeni, kuba ibhekisa kubuchule babo. Baziva ngathi banesidingo sokubonisa ixabiso labo, inyanga nenyanga.
Andikwazi ukuthetha kuzo zonke iiarhente kodwa sichithe iinyanga ubuso bethu bungcwatyiwe phantse kuyo yonke i-ESP interface kunye ne-API. Siyabazi amandla abo, ubuthathaka babo, kunye nokusikelwa kwabo umda. Siqulunqe amawaka amaphulo kwaye sibonelela ngeenkonzo zonxibelelwano kubathengisi abaninzi be-B2C kunye ne-B2B. Oku kudala ubuchule obufunyanwa kuphela ngamava. Ukusebenza kakuhle kuthetha ukuba lixesha elincinci, oko kuthetha ukuba ixabiso elincinci.
Ngaphandle kokusebenza kakuhle, ukuqhubeka kwemfundo kuba yinkcitho yomboneleli ngenkonzo. Iindleko zemivuzo, ezonyango, ixesha leholide? Indawo yeFugetaboutit.
Iindleko zihlala zingaphantsi kunaleyo yabasebenzi abasisigxina, okanye kuxhomekeke kwiimfuno, iindleko ezinkulu ngakumbi ezinokufunyanwa. Kwakhona, konke kubuyela ngaphandle.
Ukuba baphuma ngaphandle, loluphi uhlobo lwe-ROI umthengisi anokulindela? Inye kuphela indlela yokufumanisa oku: qala inguquko kwaye ukhethe ngobulumko. Inokuhlawula izabelo ezinkulu ukufumana iqabane elinokusebenza kwikhonsathi kunye nabo okanye amaqela abo asendlwini, okanye mhlawumbi bangathanda ukukhupha yonke imizamo yokuthengisa nge-imeyile, isuphu kumandongomane.
tags: email Marketingnewsletterkwabangaphandle
Ukutshintsha kwe-SaaS kwiDatabase yokuNikezela njengeNkonzo
Juni 1, 2010 ngo-12: 08 PM
Iposi egqwesileyo, uScott. Jonga esi sithuba ngenxa yezinye izizathu ezongezelelekileyo zokuba ukukhutshwa kwe-imeyile kunengqondo http://lunchpail.knotice.com/2010/05/28/why-outsourcing-email-makes-sense/